Abụ m nwafọ Igbo. Amụrụ m na ala Igbo, mụ etokwaa na ala Igbo. Ana m akuzi nkuzi asụsụ Igbo. Akụzielara m ọtụtụ mmadụ. Ọruela afọ iri nji bido ọlụ nkuzi. Azụrụm azụ n’ọlụ nkuzi. Anam akụzi Igbo ana ede ede ma nke ana agụ agụ. Enyegorom ọtụtụ mmadụ aka na ịmụta asụsụ Igbo. Anam akụzi asụsụ Igbo. Anam akụziri ndị okenye, ụmụ agbọghọbịa, na ụmụ okorobịa. Ịchọrọ iji asụsụ Igbo zụa afịa, gụa akwụkwọ, gaa njem, kọọ akụkọ ma ọbụ legharịa anya? Kpọọm agam akụziri gi. Anam akụzikwara ụmụ aka asụsụ Igbo. Ichọrọ ka ụmụ gị mụa asụsụ Igbo? Kpọọm, agam akụzirị ha nke ọma. Ọga enye gị obi ụtọ ma m kụziere gị asụsụ Igbo. Anam akụzi asụsụ Igbo nke ọma. Enwerem ihe dị iche iche eji akụzi ya. Gị bia ka m kụziere gị asụsụ Igbo agam enye ihe ndị ịga eji mụa akwụkwọ. Agam ege gị ntị ma ịkpọtụrụm oge ịchọrọ ịjụ ajụjụ. Agam enye kwa gị ihe omume ịga eji laa n’ụlọ gị. Ịchọọ ịkagbu oge ọmụmụ akwụkwọ gị, agam akagbu ma ịga agwam n’oge. Agam enyere gị aka ka ịmụta asụsụ Igbo ọfụma. Nabatam, kam kuziere gị asụsụ Igbo ọfụma.
2008 - 2010 University of Lagos English証明書がアップロードされた
1987 - 1991 University of Benin English証明書がアップロードされた
120 - Hour TESOL/TEFL Certificate証明書がアップロードされた
Teachers Registration Council証明書がアップロードされた
Developing Learning Content for Online and Blended Learning Environment証明書がアップロードされた
Teaching IELTS Exam Prep証明書がアップロードされた